ललितपुरमा ११ वर्षीय बालकले यस्तो सुसाइट नोट लेखेर गरे आत्महत्या !
काठमाडौं– ललितपुरको माल्टास्थित कालीदेवी माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ५ मा अध्ययनरत ११ वर्षीय समिर लुुङ्वाले सुसाइट नोट लेखेर आत्महत्या गरेका छन्। असार ७ गते राती ९ बजेतिर घरभित्रै उनी झुन्डिएको अवस्थामा उनको शव फेला परेको थियो। बेलुकीको खाना खाइसकेर आमा र दिदी पल्लो घरमा टिभी हेर्न गएको र बुबा पनि माथिल्लो गाउँमा गएको बेला बालकले हत्या गरेको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। उनका काका शुकबहादुर तामाङले घरमा एक्लै भएको अवस्थामा बालकले आत्महत्या गरेका बताए। उनका अनुसार समिरले स्कुलमा सर र घरमा दाई भाउजूले हेपेको कुरा बताएका थिएनन्। पढाईमा पनि उनी मेधावी थिए। ‘बावुको स्वभाव आनन्दको थियो, झगडा पनि गर्दैन्थ्यो, पढाईमा पनि टाठो थियो, एउटा बच्चालाई कसरी यस्तो सोच आयो बुझ्न कठिन भएको छ,’ समिरका काका शुकबहादुरले भने।
मेरो नाम समिर लुङ्वा हो। म कक्षा ५ मा पढ्छु। मेरो रोल नम्बर ५ हो। आज म केही कुरा भन्न चाहन्छु। म धेरै दुःखमा छु। मलाई कसैले माया गर्दैनन्। कक्षामा केटाहरुलाई पिट्ने र केटीहरुलाई नपिट्ने गर्नुहुन्छ। घरमा मलाई दाई भाउजूले हेलाँ गर्ने, कोही सर मिस त नहुने म तिनीहरुको नाम लेख्दै छु। सरस्वती मिस, दिवाकर सर, गोविन्द सरले म विरामी हुँदा विरामी भाको छैन भने। म यति भन्दै बिदा माग्छु। म ११ वर्षको भए, म जन्मेको महिना कात्तिक १४ गते हो। यो समाचार नागरिक दैनिकमा लेखिएको छ ।
कथाको पात्रले खीरलाई जीवनसँग तुलना गरेको छ । उनी सारंशमा भन्छन्, ‘तिनीहरुले पकाएको खीर हाम्रो जीवन जस्तै रहेछ । जीवनलाई यसरी पो बाँच्नुपर्ने, जीवनलाई उसरी पो काममा लगाउनुपर्ने, प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने थुप्रै-थुप्रै आदर्श मनभरी छन् ।’ मनमा अनेक आदर्श लिएर बाँचेपनि हामी भनेजस्तै वा ढंग पुर्‍याएर बाँचिरहेका हुँदैनौ । कथाको सार यत्ति हो ।
यही खोज र आकंक्षामै हामी घण्टा, दिन, हप्ता, महिना, बर्ष बिताइरहेका हुन्छौ । तर, जीवन जिउने मेलोमेसो मिलिरहेको हुँदैन । ‘कसरी जीवन जिउने’, ‘जीवन जिउने कला’ भन्ने कुरामा हामी पुरा जीवनको चक्कर लगाइरहेका हुन्छौ । कस्तो जीवन बाँच्ने भन्ने कुरा तपाईं जन्मेको वंश, तपाईं हुर्केको समाज, तपाईंले अंगालेको मूल्य र आदर्शले पनि निर्धारण गर्छ । यद्यपी संसारका सबै मान्छेको एउटा साझा चाहना हो, जीवनलाई उन्नत, सहज र सुन्दर बनाउने ।
हामीलाई लाग्छ, यो एकबारको जुनी हो । फेरी जन्म लिइने हो वा होइन ? निश्चित छैन । त्यही कारण हामी चाहन्छौ कि यही जीवनमा सम्पूर्ण सुख-सुविधा भोग गरौं । यही नै त जीवन हो ।हामी जतिसक्दो जीवनलाई भोग गर्ने प्रयासमा हुन्छौ । कसरी रमाइलो हुन्छ, कसरी सहज हुन्छ, कसरी आनन्द हुन्छ यही कुराको खोज गरिरहन्छौ । यद्यपी हाम्रो सन्तुष्टको दायरा खुम्चदै जान्छ । हामी जति जति जीवनलाई सुविधाभोगी बनाउँदै जान्छौ, उत्तिनै औडाह, बेचैनीको चक्रमा फस्दै जान्छौ । अन्ततः त्यहीबाट उम्कने यत्न गर्दागर्दै हाम्रो जीवनको रस निथि्रन्छ । हामी मृत्युको मुखमा पुग्छौ ।
मान्छेलाई आकंक्षाले दुःखी बनाउँछ । हाम्रो आकंक्षाको भकारी कहिल्यै भरिदैन । त्यसैले हामी जस्तो छौ, जे छौ, जहाँ छौ त्यही रमाउने मेलो खोज्नुपर्छ । संसारमा कोहीपनि यस्ता हुँदैनन्, जो सबै कुराले परिपूर्ण होस् । हरेकले केही न केही अभाव र समस्या झेलिरहेकै हुन्छ । त्यसैले त भनिन्छ नि सन्तुष्टि नै परम सुख हो । हाम्रो जीवनको खोज सुख हो भने हामीले आफैसँग सन्तोष गर्नुपर्छ । सन्तुष्ट मनले नै जीवनलाई प्रफुल्लित बनाउँछ । उमंगित बनाउँछ । जीवन कस्तो बनाउने ? कसरी जिउने भन्ने कुरामा हामीले धेरै खोज गरिरहनु पर्दैन । तपाईंले आफ्नै बालबच्चालाई कति र जीवनजन्तु हेरेर जीवनका धेरै कुरा सिक्नुहुनेछ, जसले तपाईंको जीवन रहरलाग्दो बनाउँछ । हामीलाई प्रकृतिले जस्तो जीवन दिएको छ, त्यस्तै बाँच्ने हो भने सुन्दर हुन्छ । तर, हामी अप्राकृतिक तौर तरिका अपनाउँछौ । यसले हामीलाई फन्दामा पार्छ ।
कस्तो जीवन बाँच्ने भन्ने कुरा आफ्नै बालबच्चाबाट सिक्न सकिन्छ । तपाईंको बालबच्चालाई नियाल्नुहोस् । उनीहरुको मनोभाव बुझ्नुहोस् । उनीहरुको चञ्चलता हेर्नुहोस् । उनीहरुको भावना अनुभूत गर्नुहोस् । जीवनको सौन्दर्य खोज्ने हो भने साना एवं अवोध बच्चासँग जतिसक्दो एकाकार हुनुहोस् । उनमा तेरो, मेरो, आफ्नो, अर्का भन्ने भावना हुँदैन । चाहे जतिसुकै ठूलो कुलमा जन्मिएको होस्, जतिसुकै कुलिन खानदानमा जन्मिएको होस्, उनमा एकरत्ति दम्भ हुँदैन । अहंकार हुँदैन । उनको आँखाले कसैमाथि विभेद गर्दैन ।
बच्चाहरु सन्तुलित हुन्छन् । उनीहरुलाई तपाईं पिरो, अमिलो वा स्वास्थ्यले नरुचाउने खानेकुरा दिनुहोस्, पटक्कै खाने छैन । बच्चाले सुपाच्य खानेकुरा मात्र रुचाउँछ । उनलाई जति चाहेको त्यती मात्र खान्छ । आवश्यक्ताभन्दा बढी खाँदैन । बच्चाको यो खानपान शैलीबाट पनि हामीले सिक्न सक्छौ । किनभने आज हाम्रो जीवनको तालमेल बिग्रनुमा खानपानप्रतिको आशक्ति पनि हो । बच्चाहरु आफुलाई चित्त नबुझेको कुरामा तुरुन्त प्रतिक्रिया जनाउँछन् । आफुलाई असहज भएमा रुन्छन् । आफुलाई चित्त दुखेमा रुन्छन् । तर, हामी हरेक कुरा भित्र भित्रै गुम्साएर राख्छौ । त्यही कारण त हामी कुष्ठित हुन्छौ । बच्चाले जस्तै मनको मैलो पखाल्ने हो भने हामीमा रिस, राग, कुष्ठा रहँदैन ।
बच्चाहरु सधै उत्सुक हुन्छन् । नयाँ कुरा जान्न, छुन, खेल्न चाहन्छन् । हरेक कुराप्रति उनीहरुको प्रश्न हुन्छ । जिज्ञासा हुन्छ । बच्चाहरुबाट सिक्नुपर्ने गुण यो पनि हो । हामीले बच्चाहरु जस्तै हरेक कुरामा उत्सुकता राख्ने हो भने धेरै कुरा जान्न सक्छौ । बुझ्न र अनुभूत गर्न सक्छौ । यस्ता थुप्रै कुरा छन्, जो बच्चाबाट हामीले जीवन जिउने कला सिक्न सक्छौ । जीवन कसरी बाँच्ने, जीवनलाई कस्तो बनाउने ? भन्ने प्रश्नको हल तपाईंको बच्चाको जीवनबाट मिल्नेछ । प्रकृतिले जस्तो दिएको छ, त्यस्तै जीवन बाँच्ने हो भने हामीले अन्यत्र भौतारिनुपर्दैन ।